MPT Myanmar | Moving Myanmar Forwardအသံဝန်ဆောင်မှု ပရိုမိုရှင်းများ Archives - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Category: အသံဝန်ဆောင်မှု ပရိုမိုရှင်းများ
A Kyite Pyaw +
အသံဝန်ဆောင်မှုပရိုမိုးရှင်းများ »အကြိုက်ပြော +>>> “ဤဝန်ဆောင်မှုအား ရယူအသုံးပြုခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းသည် အောက်ဖော်ပြပါ link တွင် ဖော်ပြပါရှိသော နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသည့် MPT ၏ အထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုသဘောတူညီပြီးဖြစ်သည်။”
အခုပဲ အကြိုက်ပြော+ ဝယ်ယူမယ်
အကြိုက်ပြော+ Voice Pack ဆိုတာဘာလဲ။
အကြိုက်ပြော+ Voice Packကို အသုံးပြုပြီး မည်သည့် MPTဖုန်းနံပါတ်ကိုမဆို သက်သာသောနှုန်းထားဖြင့်ခေါ်ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အမည် နှုန်းထား မိနစ် အသုံးပြုနိုင်ပုံ သက်တမ်း ဝယ်ယူရန်
၇ရက်သုံး အကြိုက်ပြော +
Voice Pack ၈၅၀ ကျပ် ၁၃၂ မိနစ်
MPT အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း
(ကြိုးဖုန်းအပါအဝင်) ၇ ရက် *600# *600*3#
၃၀ရက်သုံး အကြိုက်ပြော +
Voice Pack ၁၅၀၀ ကျပ် ၂၃၄ မိနစ်
(ကြိုးဖုန်းအပါအဝင်) ၃၀ ရက် *600# *600*2#
၉၀ ရက်သုံး အကြိုက်ပြော +
Voice Pack ၃၉ ၀၀ ကျပ် ၆၁၉ မိနစ်
(ကြိုးဖုန်းအပါအဝင်) ၉၀ ရက် *600# *600*1#
၁။ MPT GSM/WCDMA အသုံးပြုသူများအားလုံး အကြိုက်ပြော+ Voice Pack ကို ဝယ်ယူ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
၂။ MPT ကြိုးဖုန်းများ အပါအဝင် ခေါ်ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ သတ်မှတ်ထားသောနှုန်းထားမှာ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပါဝင်ပြီးသား ဖြစ်ပါသည်။
၄။ ဝယ်ယူပြီးသည့်နေ့မှ စတင်၍ ၇ ရက် ၊ ၃၀ ရက် နှင့် ၉၀ ရက် များအတွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၅။ CDMA သုံးစွဲသူများ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
MPT Voice Package
သုံးစွဲသူများစိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ရန် Voice Pack သုံးမျိုးကို MPT က မိတ်ဆက်ပေးထားပါသည်။
အကြိုက်ပြော +Voice Pack ဆိုတာ MPT မှ သုံးစွဲသူတွေအတွက် ပေးထားတဲ့ အစီအစဉ်သစ်တစ်ခုပါ။
၁။ အကြိုက်ပြော + Voice Pack ဆိုတာ ဘာလဲ?
အကြိုက်ပြော+ Voice Pack ဆိုတာ MPT မှ သုံးစွဲသူတွေအတွက် ပေးထားတဲ့ အစီအစဉ်သစ်တစ်ခုပါ။ *600# ကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
(ကြိုးဖုန်းအပါအဝင်) ၇ ရက်
Voice Pack ၁၅၀၀ ကျပ်
(ကြိုးဖုန်းအပါအဝင်) ၃၀ ရက်
၉၀ ရက်သုံး အကြိုက်ပြော
(ကြိုးဖုန်းအပါအဝင်) ၉၀ ရက်
၂။ အကြိုက်ပြော+ Voice Pack ကို ဘယ်သူတွေ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်မှာလဲ?
MPT GSM/WCDMA အသုံးပြုသူအားလုံး ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
၃။ ဒီ pack နဲ့ အခြားအော်ပရေတာတွေကို ဖုန်းခေါ်လို့ရနိုင်မှာလား?
မရနိုင်ပါဘူး။ MPT ဖုန်းနံပါတ်အချင်းချင်း ခေါ်ဆိုခြင်းသာ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
၄။ အကြိုက်ပြော+ Voice Pack ကို ဘယ်လောက်ကြာ အသုံးပြုနိုင်မှာလဲ?
အကြိုက်ပြော+ Voice Pack ကို ၇ ရက်၊ ၃၀ရက် နှင့် ၉၀ ရက် ကြာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၅။ အကြိုက်ပြော+ Voice Pack အပြင် ၃၉၉ ကျပ် Voice Pack ကိုလည်း ဝယ်ယူထားပါတယ်။ ဘယ် package ထဲက အရင်ဖြတ်မှာပါလဲ?
၃၉၉ ကျပ် Voice Pack ၏ အသုံးပြုနိုင်သောသက်တမ်းမှာ ပိုနည်းသောကြောင့် ၃၉၉ ကျပ် Voice Pack
ထဲက အရင်ဖြတ်မှာဖြစ်ပါသည်။ ပြီးမှ အကြိုက်ပြော+ Voice Pack ထဲမှ ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။
၆။ အကြိုက်ပြော+ Voice Pack ကို အကြိမ်ရေ မည်မျှ ဝယ်ယူနိုင်မည်နည်း။
အကြိုက်ပြော+ Voice Pack ကို စိတ်ကြိုက် ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
၇။ ယခင်အကြိုက်ပြော+ Voice Pack ရဲ့ မိနစ်နဲ့သက်တမ်းကျန်ရှိနေချိန်မှာ နောက်ထပ် အကြိုက်ပြော+ Voice Pack ကို ဝယ်ယူပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။
မိနစ်နဲ့သက်တမ်းသည် ပေါင်းစည်းသွားမှာမဟုတ်ပါ။ ဝယ်ယူထားသော အကြိုက်ပြော+ Voice Pack တစ်ခုချင်းစီသည် ယင်းတို့၏ သတ်မှတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင် အသီးသီး ကုန်ဆုံးပါမည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဇူလိုင် 30, 2018 ဒီဇင်ဘာ 7, 2021 Categories အသံဝန်ဆောင်မှု ပရိုမိုရှင်းများ
Voice Offers » MPT Voice Package
MPT Voice Package ဆိုတာဘာလဲ?
သုံးစွဲသူများစိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ရန် Voice Package သုံးမျိုးကို MPT က မိတ်ဆက်ပေးထားပါသည်။ MPT Voice Packageများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူများသည် တစ်မိနစ်လျှင် ၈ကျပ်အထိ သက်သာသောစျေးနှုန်းများဖြင့် MPT သုံးစွဲသူ မိတ်ဆွေ၊သူငယ်ချင်းများဆီ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
MPT သုံးစွဲသူများသည် MPT Voice Package ကိုရယူကာ သုံးစွဲသူ သန်း၂၀ကျော် ရှိနေပြီ ဖြစ်သည့် မြန်မာပြည်၏ အကြီးမားဆုံး MPTကွန်ရက်ပေါ်တွင် အဆက်အသွယ်တွေမပြတ်ဘဲ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါပြီ။
မိတ်ဆွေ၊သူငယ်ချင်းများဆီ MPT ကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် အဆက်အသွယ်တွေမပြတ်ဘဲ ဖုန်းခေါ်ဆိုလိုက်ရအောင်။
မိမိနှစ်သက်ရာကို Voice Package ကို ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
အခုပဲ MPT Voice Packဝယ်ယူလိုက်ပါ
10mins Pack 30mins Pack 50mins Pack
(ကုန်သွယ်ခွန်ပါ၀င်ပြီး) ၉၉ကျပ် ၂၄၉ကျပ် ၃၉၉ကျပ်
မိနစ် ၁၀ မိနစ် ၃၀ မိနစ် ၅၀ မိနစ်
၀ယ်ယူရန် *2220# ကိုခေါ်ဆိုပါ။ *249# ကိုခေါ်ဆိုပါ။ *399# ကိုခေါ်ဆိုပါ။
သက်တမ်း ၁ ရက် ၃ ရက် ၃ ရက်
ရယူရန် ရယူရန် ရယူရန်
*Package စျေးနှုန်းများတွင် ကုန်သွယ်ခွန်ပါ၀င်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
* 10mins Package ၏ သက်တမ်းမှာဝယ်ယူသည့်နေ့၏ 23:59:59 အထိဖြစ်ပါသည်။
*30mins နှင့် 50mins Package ၏ သက်တမ်းမှာ ၀ယ်ယူသည့်နေ့၏ သုံးရက်မြောက်နေ့ ညသန်းခေါင်ယံ အချိန် (၂၃:၅၉:၅၉နာရီ)အထိ ဖြစ်ပါသည်။
*GSM/WCDMA ဖုန်းအသုံးပြုသူများအားလုံး Voice Package များကို ၀ယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Other Voice Promotions →
၁။ MPT GSM/WCDMA Prepaid နှင့် Postpaid (Base Tariff အသုံးပြုသူများအပါအဝင်) အသုံးပြုသူများအားလုံး ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
၂။ CDMA နှင့် လက်ရှိအသုံးပြုခြင်းမရှိသူများ ဝယ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၄။ ၁ ရက်စာ Voice Pack ၏ သက်တမ်းမှာ ၀ယ်ယူသည့်နေ့၏ ညသန်းခေါင်ယံအချိန် (၂၃:၅၉:၅၉နာရီ) အထိ ဖြစ်ပါသည်။ ၃ ရက်စာ Voice Pack တို့၏ သက်တမ်းမှာ ၀ယ်ယူသည့်နေ့၏ သုံးရက်မြောက်နေ့ ညသန်းခေါင်ယံအချိန် (၂၃:၅၉:၅၉နာရီ) အထိ ဖြစ်ပါသည်။
၅။ MPT-MPT ဖုန်းအချင်းချင်းမှလွဲ၍ အခြားဖုန်းများသို့ခေါ်ဆိုပါက ဝယ်ယူထားသော Any-net မိနစ်များ (သို့) သုံးသလောက်ပေးနှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၆။ အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၁။ MPTမှာ ဘယ်လို Voice Package တွေရှိတာပါလဲ။
MPTသုံးစွဲသူများ ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်စေရန် Voice Package အမျိုးအစား(၃)မျိုးကို MPTမှ မိတ်ဆက်ပေးထားပါသည်။ Voice Pacakage များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူများသည် MPTဖုန်းများသို့ အသက်သာဆုံး နှုန်းထားများဖြင့် ခေါ်ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Package စျေးနှုန်းများတွင် ကုန်သွယ်ခွန်ပါ၀င်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂။ MPTရဲ့ Voice Packages ကိုဘယ်သူတွေဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မှာပါလဲ။
MPT GSM/WCDMA ဆွေသဟာ(သို့မဟုတ်)ရှယ်ပြော(သို့မဟုတ်)ရွှေစကားနှင့် Base Tariff အစီအစဉ် အသုံးပြုနေသူများအားလုံးသည် MPT Voice Package များကို ၀ယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၃။ MPTရဲ့ Voice Package ကို ဘယ်လိုဝယ်ယူနိုင်မှာပါလဲ။
10Mins Voice Package ကိုဝယ်ယူရန် *2220# ကိုခေါ်ဆိုပါ။
30Mins Voice Package ကိုဝယ်ယူရန် *249# ကိုခေါ်ဆိုပါ။
50Mins Voice Package ကိုဝယ်ယူရန် *399# ကိုခေါ်ဆိုပါ။
10Mins Voice Package ၏ သက်တမ်းမှာ ၀ယ်ယူသည့်နေ့၏ ညသန်းခေါင်ယံ အချိန် (၂၃:၅၉:၅၉နာရီ)အထိ ဖြစ်ပါသည်။
30Mins နှင့် 50Mins Voice Package တို့၏ သက်တမ်းမှာ ၀ယ်ယူသည့်နေ့၏ သုံးရက်မြောက်နေ့ ညသန်းခေါင်ယံ အချိန် (၂၃:၅၉:၅၉နာရီ)အထိ ဖြစ်ပါသည်။
၄။ တစ်ရက်အတွင်းမှာ 10Mins Voice Package တွေအများကြီးဝယ်ယူနိုင်ပါသလား။
၅။ MPT Voice Packageတွေ ၀ယ်ယူထားပါတယ်။ အခြားအော်ပရေတာနံပါတ််ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့ အခါမှာ ဘယ်လိုကျသင့်မှာပါလဲ။
အခြားအော်ပရေတာနံပါတ်များသို့ဖုန်းခေါ်ဆိုပါက ပုံမှန်ဖုန်းခေါ်ဆိုခနှုန်းထား အတိုင်းသာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဇူလိုင် 31, 2017 မေ 20, 2021 Categories အသံဝန်ဆောင်မှု ပရိုမိုရှင်းများ
FTTH Partner mm
MPT-KSGM Joint Operations ၏ ဒုတိယအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် Mr. Kazuhiko MASUDA က ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စတင်ကာ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်
MPT က မြန်မာနှစ်သစ်ကို “နှစ်ဦးထိပေါက်” သင်္ကြန်ပရိုမိုးရှင်းဖြင့် ကြိုဆို